Home Wararka Al-Shabaab Oo La Wareegay Goofguduud Buureey
Al-Shabaab Oo La Wareegay Goofguduud Buureey
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ee Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in saaka aroortii hore ciidammo ka tirsan Al-Shabaab ay qabsadeen tuulada Goofguduud Buureey oo qiyaastii 30 km magaalada Baydhabo uga beegan dhinaca waddada aada degmada Waajid sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Ciidanka weerarka qaaday ayaa tuulada dagaal la’aan ku galay ka dib markii ciidanka dawladdu ay isaga baxeen halkaasi. Illaa hadda dhinacyada Al-Shabaab iyo maamulka Konfur Galbeed kama aysan hadlin weerarkan u dambeeyay.
Al-Shabaab ayaa horey u qabsatay tuulada Goofguduud Shabeelow oo qiyaastii 30 km magaalada Baydhabo uga beegan dhinaca wadada aada degmada Diinsoor.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda iyo kuwa Maamulka Koonfur Galbeed ee Gobolka Baay weli kama hadlin la-wareegitaanka Al-Shabaab ee deegaanka Goofguduud Buureey.
Previous articleWarsaxafadeed ay soo saartay beesha Warsangeli oo baaq loogu dirtay Gud. Barlamaanka iyo MW Farmaajo (Aqriso Baaqa)
Next articleWAR DEG DEG:Qarax Xoogan oo laga Maqlay Muqdisho
Caddaawe Cali Aadan oo lagu dilay gobolka Mudug
Nabadoon lagu dilay Gobolka Gedo